TORITENY Alahady 24 Septambra 2017 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 24 Septambra 2017
“Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” II Timonty 1 : 7 – 8
Josoa 24 : 14 – 24 / Jaona 9 : 24 – 28 / Romana 10 : 5 – 15
“Vavolombelona ho an’ny tenanareo hianareo fa efa nifidy an’i Jehovah ho tompoinareo.”; Ary hoy ny olona: Eny, vavolombelona izahay… Jehovah Andriamanitray no hotompoinay, ary ny feony no hohenoinay.” Josoa 24 : 22.
Zava –dehibe ny manapa – kevitra sy manambara ampahibemaso ny fanekem-pinoana hifidy izay Andriamanitra ho tompoinao? Amin’ny faneken’ny olona iray izay safidiny dia tsy misy afa –maina fa ho vavolombelon’izay ekeny izy.
Koa raha nifidy ny hanompo an’I Jehovah Andriamanitra ianao,; dia ho vavolombelon’ny fanekena izay ataonao, ary tompon’andraikitra feno amin’izany. Satria tena Andriamanitra Masina sy saro-piaro ary tsy hanaiky mora foana ny fangaronao Azy amin’ny andriamanin-kafa Izy Fanekena tsy atao amin’ny fihatsaram-belatsihy na miafinafina . Ndeha ary ho jerentsika ny bokin’I Josoa ho tari-dalàna ho antsika izay efa nifidy hanompo sy hanaraka an’I Jehovah Andriamanitra .
Raha ny an’I Josoa manokana dia sahy nanambara ampahibemaso teo anatrehan’ny zanak’Israely izy ka sahy nanao hoe “ Raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an’I Jehovah izahay” and 16b ary voatahiriny ny fanekeny fa mba manao ahoana kosa ny anao ?
Ahoana no ahafahanao mitahiry ny fanekena izay efa nataonao teo imason’Andriamanitra sy ny olona ?
I – Matahora an’Andriamanitra
Manompo Azy amin’ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ny fahamasinana . Ampiasao betsaka indrindra ny fotoana , vola , fahaizana , tombon’andro sy izay anananao ho an’Andriamanitra. “matahora an’i Jehovah, ka manompoa Azy amin’ny fahitsiana sy ny fahamarinana; “Andriamanitra masina Izy, Andriamanitra saro-piaro Izy ka tsy hamela ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo.”and 14a ; 19a
Tsy manafangaro an’Andriamanitra amin’ny zavatra hafa. Aoreno amin’Andrimanitra ny fitokisanao sy ny fanantenanao. “ario ny andriamanitra izay notompoin’ny razanareo tany an-dafin’ny Ony sy tany Fgypta, ka manompoa an’i Jehovah. and 14b
II- Mahatsiaro izay efa nitantanan’Andriamanitra ny fiainanao
Tsarovy mandrakariva ny tanan’Andriamanitra mitsotra mikarakara anao.
“Izy no nitondra antsika sy ny razantsika nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta, tany amin’ny trano nahandevozana, ary Izy no nanao ireny famantarana lehibe ireny teo imasontsika ka niaro antsika teny amin’ny làlana rehetra nalehantsika sy teny amin’ny firenena rehetra izay notetezintsika. Ary Jehovah nandroaka ny firenena rehetra teo anoloantsika, dia ny Amorita izay nonina teto amin’ny tany; koa izahay koa dia mba hanompo an’i Jehovah, fa Izy no Andriamanitsika.
Fintina : Ho anao izay efa nifidy ny hanompo an’Andriamanitra ka nandray an’I Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainanao , ireo no tari dalana natolotra anao mba hanananao faharetana amin’izay efa nekenao. Saino izany, eritrereto dia tanteraho mba ho tena sahy hijoro vavolombelon’ny Tompo ka ho isan’izay ho mpandova ny fianana mandrakizay ianao